नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो : डा. चन्द्रमणि अधिकारी – Health Post Nepal
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ भइसक्यो : डा. चन्द्रमणि अधिकारी
२०७८ वैशाख २८ गते १९:२२
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’नै भइसकेको बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार कोभिड अस्पतालका प्रमुखसँग गरेको छलफलमा डा. अधिकारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली ‘कोल्याप्स’ भइसकेको भन्दै स्वास्थय नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘अस्पतालले संक्रमितको उपचारको जिम्मा लिन सकेका छैनन्। सरकारले अस्पतालमा बेड संख्या बढाउने कार्य भाषणमा मात्रै गरिहेको छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘ जिम्मेवार निकायले दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण कोभिड संक्रमित लगायत समग्र स्वास्थ्य प्रणाली धरापमा परेको छ।’
उनले अस्पतालहरूले बिरामी नै लिन छोडिसकेको भन्दै स्थिति निकै भयावह भइसकेको बताए।
‘हाम्रो हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स भइसकेको छ। यसको उदाहरण मेरो अस्पतालको दिन्छु। हामीलाई नेपाल सरकारले तिमी मुटुको बिरामी हेरिदेउ र मुटुका बिरामीलाई यदि कोभिड लाग्यो भने त्यसको जिम्मा लेऊ भनेको छ। हामी अहिले पनि लिनसक्छौं। अर्को हस्पिटलले कोभिड मात्रै भएका बिरामीलाई जिम्मा लिइ देओस् न त, तर कसैले पनि जिम्मा लिन सक्तैन अहिले।’
उनका अनुससार स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको पहिलो वेभ आएको बेलामा नै सम्पूर्ण सरकारी अस्पतालका निर्देशकलाई बोलाएर कति बेड व्यवस्थापन गर्न सक्छौ भनेर भन्नुपर्ने थियो। बेड व्यवस्थापन गर्ने कुरा एक दिनको कुरा होइन।
‘म दुःखका साथ भन्छु, वीर अस्पतालको ५ सय शैय्याको छ तर सञ्चालन गर्न नसक्नु अहिलेसम्म भनेको लाज मर्नुको अवस्था हो। हामी के हेरेर बसिरहेका छौं? हाम्रा बिरामी इमर्जेन्सी बाहिर बसिरहेका छन्। ५ सय शैयाको वीर अस्पताल टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने। यसको जिम्मा कसले लिने? यो मिटिङ १ वर्ष अगाडि सुरु गर्नुपर्थ्यो’ उनले भने।
सबै अस्पतालहरुमा भेन्टिलेटर, इन्टेन्सिभ केयर युनिट ९आइसियु०, हाइ डिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडियु० विरामीले भरिएको अवस्था रहेकाले तत्काल अन्य कोभिडका बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
‘गंगालालमा कुनै पनि आइसियु छैन। इमर्जेन्सीलाई पनि फूल कोभिड बनाएका छौं। हामीले अर्को अस्थायी किसिमको संरचनालाई इमर्जेन्सी बनाउनुपरेको छ,’ उनले भने।